Taksiborosy Sprinter nivarina tanaty hantsana…: olona roa maty tsy tra-drano, mpandeha 14 haf | NewsMada
Taksiborosy Sprinter nivarina tanaty hantsana…: olona roa maty tsy tra-drano, mpandeha 14 haf
Vokatry ny tsy fitandremana ? Niharan-doza teny Manerinerina, lalam-pirenena fahefatra, omaly vao mangirandratsy ny taksiborosy Sprinter iray. Tsy nahafehy ny familiana ilay mpamily, ka nivarina tanaty hantsana ilay fiara. Ankoatra ireo olona roa maty tsy tra-drano, mpandeha 14 naratra mafy.
Misesisesy ny lozam-pifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena maro samihafa. Tranga iray nahafatesan’olona roa indray ny teny Manerinerina, lalam-pirenena fahefatra, omaly vao maraina tokony ho tamin’ny 03 ora. Tra-doza tamin’izany ny fiara taksiborosy iray mampifandray an’i Mandritsara sy ny renivohitra. Latsaka tao anaty hantsana ny fiara. Vokany, mpandeha miisa roa indray namoy ny ainy ary olona 14 hafa naratra, isan’izany ny mpamily. Araka ny fanadihadiana, tsy fitandreman’ny mpamily ny nahatonga ny loza. « Fiolanana ny lalana kanefa mbola nandeha mafy ny fiara ka izao nivarina anaty hantsana izao », hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana, misahana ny famotorana.
Nisy tamin’ireo mpandeha no voa mafy toy ny tapa-tanana sy tongotra vokatry ny loza. Tao ihany koa anefa ireo tsy dia nahina. « Lehilahy avokoa ny ankabeazan’ireo naratra raha vitsy kosa ny zaza amam-behivavy voa tamin’izany », hoy hatrany ny zandary. Taorian’ny loza, nalefa vonjimaika ao amin’ny hopitalin’Ankazobe ireo naratra. Efa any amin’ny fianakaviany avy ny vata-mangatsiakan’ireo namoy ny ainy, izay ramatoa 59 taona avy any Mandritsara sy lehilahy iray sahabo ho 40 taona avy eto Antananarivo.
Voatazona vonjimaika ny mpamily
Potika ilay fiara ary vaky avokoa ireo fitaratra taminy. Hatramin’ny ora nanoratany farany, mbola tao anatin’ny fampiakarana ilay taksiborosy ny zandarimaria. Voatazona vonjimaika ao amin’ny tobin’ny zandary ao Manerinerina ny mpamily atao fanadihadiana.
Ankoatra izay, ankizilahy kely 08 taona ihany koa maty nofaohin’ny fiara taksiborosy, ny marainan’ny 08 novambra teo teny amin’ny lalam-pirenena fahenina. Niampita arabe izy tao amin’ny fokontany Antanandava, distrikan’Analalava ka voadonan’ilay fiara mampitohy an’i Sambava sy Antananarivo. Nentina teny amin’ny hopitaly mihazo an’Antsohihy izy, saingy tsy tana ny ainy.
Araka izany, manentana amin’ny fitandreman’ny tsirairay ny mpitandro filaminana mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana.